China Iphise igbu egbugbu igwe na eweputa | MOLON
Abụọ Control ụdịdị Digital Power isi iyi maka Tattoo igwe Multifunctional Red Okpokoro Isi Tattoo Power Tụkwasịnụ
1. Ike ọkọnọ nwere oge oge, pịa ka mmalite na-akwụsị, ogologo pịa atọ sekọnd efu efu nhicha
2. Site gbakwunye na mwepu bọtịnụ, ogologo pịa nwere ike ịga n'ihu ịgbakwunye na wepụ voltaji.
3. Nwere ogologo nzọụkwụ na jog sọrọ mode ịgbanwe.
4. Enwere ike ịtọ bọtịnụ anọ iji chekwaa ọrụ nke voltage nke anọ.
5. Ntughari onodu abuo
6. Ọrụ ncheta
7. Ọrụ oge
MOLONG TATTOO SUPPLY bụ onye nrụpụta akụrụngwa ọkachamara ọkachamara nke nọrọ n'ọhịa a ọtụtụ afọ. Naanị anyị na-enye ngwaahịa dị elu na asọmpi asọmpi ma nye ọmarịcha ọrụ ahịa. Anyị na-enye nnukwu nhọrọ nke akpati ndị na-egbu egbugbu, akpa egbugbu a na-ekpofu egbugbu, ndụmọdụ egbugbu, njigide egbugbu, agịga egbugbu, igwe eji egbu egbu, akụrụngwa egbugbu, ike igbu egbugbu, ịkwanye ihe na ngwa ngwa. Anyị na-agba mbọ ime ngwaahịa dị elu ma na-enye mmesi obi ike. Anyị anaghị akwụsị akwụsị.
1. Kedu ihe ga-abụ nkwakọ ngwaahịa ahụ?
Mbukota na anyị ika, Neutral mbukota, OEM mbukota (Ọ bụrụ na ndị ọzọ ibu na-arịọ, ha nwere ike na-etinye ha logo na ngwugwu, na-negotiable)
2. Kedu ka ogo ga-adị?
Anyị na-ekwe nkwa na ngwaahịa ndị ha ga-enweta zuru oke, dị ọcha, na-arụ ọrụ nke ọma.
Onye nyocha ihe nrụpụta ga - ekwenye na nchịkọta dị n'ọnọdụ dị mma tupu ebupu ya. Na mgbakwunye, maka nsogbu ọ bụla ị nwere ike ịkpọtụrụ MOLONG mgbe ịrechara ahịa, ị nwere ike ịnweta azịza ya na azịza ya.
3. Kedu ego anyị nwere?
Ọnụahịa ụlọ ọrụ. Anyị bụ ndị nrụpụta, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa asọmpi. Karịsịa maka ndị na-ere ahịa, ego pụrụ iche maka ha iji nyere ha aka ịgbasa ahịa ha ngwa ngwa.
4. Kedụ ka m ga-esi nweta ihe nlele?
Enwere ike ịgbanwe. Nọmalị anyị anaghị enye n'efu n'omume. N'ọnọdụ ole na ole ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ maka mbupu ahụ, anyị na-eziga ihe atụ nke grips, agịga na ụfọdụ ngwa. Maka ndị ahịa nwere ike, anyị na-enye ụfọdụ mbelata ego pụrụ iche.
5. Ogologo oge ole ka mbupu ahụ ga-ewe?
Iji zipu site na Express dị ka DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS wdg, ọ na-abụkarị ụbọchị 3-10,
Iji banye n'ụgbọ mmiri, ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 15 na 45.
Dabere na ihe kpatara ọtụtụ ihe, ihe ndị nnọchi anya, ebe dị anya, na usoro nnabata nke omenala, wdg.
6. Kedu usoro ịkwụ ụgwọ?
T / T (nnyefe ego), Western Union, Paypal, Alibaba na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ, Alipay Etc.
Nke gara aga: Elu àgwà Pụrụ Iche Tkpụrụ Tattoo Power non-ileghara Multifunctional Digital Tattoo Power Tụkwasịnụ
Osote: MO wireless Nchaji Tattoo ike ọkọnọ
TP-7 THUNDERLORD na-enye ike igbu egbugbu
HELLO II ikuku ike ikuku
Aurora 2 Tattoo Ike Tụkwasịnụ
MO wireless Nchaji Tattoo ike ọkọnọ